‘बलात्कारीलाई भन्दा फेसबुकमा जिस्क्याउनेलाई बढी सजाय गर्न खोजियो’ – रघुजी पन्त – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
‘बलात्कारीलाई भन्दा फेसबुकमा जिस्क्याउनेलाई बढी सजाय गर्न खोजियो’ – रघुजी पन्त
By डिजिटल खबर Last updated Jan 10, 2020 33 0
काठमाडौं, २५ पुष । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विद्येयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गराए । उनले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनैपनि देशको संविधानमा नराखिएको पनि जिकिर गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त विद्येयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘विद्येयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन् । यो विद्येयक संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो । यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन् । खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन् ।’
पन्तले उक्त विद्येयक आवश्यक रहेको बताउँदै विद्येयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सरकारले बनाउने सबै कानूनहरु एकरुपता हुनुपर्छ । यो विद्येयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिईएन् । पत्रिका र फेशबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ । यो विद्येयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो दिईएन् ।’ उनले विद्येयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको पनि सुनाए । उनले थपे,‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दापनि फेशबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढि गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।’
उनले विद्येयकको विषयमा पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘यसमा सबैभन्दा चनाखो त पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो । के महासंघ बेफुशर्दी भएको हो ?’ उनले संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न नपाईने पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दो ठूलो कुरा त लोकमत हो ।’
तपाईहरु पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ ? तपाईहरुले विरोध गर्दैमा के हुन्छ र ? भनेर एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अल्पमतमा हुँदैमा बोल्न छोड्नुहुन्न । यसले केही फरक पर्दैन् । अलोकतान्त्रिक कानून पारित गर्नुहुँदैन् । बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुँदैन् ।’
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले सूचना प्रविधि विद्येयक आफ्नो ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड जनताले थाहा नपाउन भन्नको लागि ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेको पनि टिप्पणी गरे ।
बस्नेतले सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पास भए नेपालका सबै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनेपनि खतरा औंल्याए । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सका लुईस १४जस्तै ‘आई एम द स्टेट’ को बाटोमा अघि बढ्न खोजेको पनि आरोप लगाए । तर, अहिलेका शासकहरुले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि वा लोकतान्त्रिक विरोधी गतिविधि गर्न खोजेपनि जनताले तिनीहरुलाई तह लगाई छाड्नेपनि उनले विश्वास दिलाए ।
तर, त्यस्ता शासकहरुसँग सचेत हुनुपर्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए । उनले भने,‘हामी त्यस्ता शासकहरुसँग सचेत र सजग हुनुपर्छ ।’ उनले सूचना प्रविधि विद्येयकको सवालमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन बोलिरहेको छैन् ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘पत्रकार महासंघ किन गम्भिर भएको छैन् ?’ विद्येयकका प्रावधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा उनले आपत्ति जनाए । उनले आपत्ति जनाएका प्रावधानमा धारा ९४, धारा ११५ लगायत रहेका छन् ।
बस्नेतले विद्येयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी सडकमा आउने पनि घोषणा गरे । उनले भने,‘यो विद्येयकले कल्पना गरेको अदालत शाही आयोगभन्दा कम छैन् । त्यसैले यो विद्येयकका प्रावधानहरु संशोधन वा परिमार्जनमात्रै होईन यो विद्येयक नै खारेजी गर्नुपर्छ ।’ उनले यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो पार्टी धेरै लडेको पार्टी भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘कांग्रेसका चार तारे झण्डमा एउटा तारा प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो ।’ उनले यो देशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै ठूला ठूला परिवर्तन भएको जिकिर गरे ।
उनले वर्तमान सरकार आएपछि मुलुकमा धेरै ठूला ठूला काण्ड मच्चिएको पनि आरोप लगाए । उनकाअनुसार ओली सरकार आएपछि सुन काण्ड, वाईडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका धेरै विवादित काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । उनले भने,‘नेकपाकै सांसदहरु बहुमत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त वाईडबडीमा चार अर्बभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ भनेर रिपोर्ट नै बाहिर ल्याए । तर, प्रधानमन्त्री भएकै छैन भनेर बोल्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला बुद्धिजिवीहरुलाई थला पार्ने कुरा गरेको पनि आरोप लगाए । त्यतिमात्रै नभएर उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको नामा नेपालको अरबौं अरब रुपैयाँ विदेश जान लागेको पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘यो देशमा राख्न जरुरी थियो । यसको लागि म मन्त्री भएको बेलामा मकवानपुरमा २ सय ५० रोपनी जग्गा अकुपाई गरिएको छ । मेरै पालामा यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको थियो । तर, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँग जिटुजी भएको छ । म ठोकेर भन्छु यसमा ७ अर्ब आर्थिक घोटाला वा भ्रष्टाचार गर्ने नियत छ ।’
सरकारले यतिलाई किन ब्रम्हलुट गर्न दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘देशका सबै सम्पत्ति यतिलाई दिनुपर्ने कारण के हो ?’ उनले फोरजीमा पनि घोटाला भएको आशंका व्यक्त गरे ।
सूचना प्रविधि विद्येयक ल्याएर सरकारले बोल्न, लेख्न ननिदको लागि र प्रेसको घाँटी रेट्नको लागि ल्याउन लागेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेपालको मिडियालाई बन्देज लगाउन धेरै कोशिस गरेको स्मरण गराउँदै आज ज्ञानेन्द्र कहाँ पुगे ? भन्दै त्यो कुरा हेक्का राख्न वर्तमान सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले भने,‘ज्ञानेन्द्रकै जस्तो दशा आजको शासकलाई पनि सर्ने हो ।’ सरकारले यो विद्येयक फिर्ता लिने दिन आउनेपनि उनले ठोकुवा गरे । उनले भने,‘सडकमा जनता उत्रिएपछि यो सरकारले विद्येयक फिर्ता लिनुपर्ने दिन आयो भने त्यही दिनबाट यो सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ।’
Digital KhabarLawNepalRaghuji PantaReporters ClubReporters NepalTechnology
७ माघ २०७७, बुधबार १०:४७